Akụkọ - Otu esi azụta ahịhịa mmiri na-acha mmiri mmiri maka ndị mbido?
Kedu otu esi azụta brushes agba mmiri maka ndị mbido?
Kedu ka ndị mbido si azụ brushes brushes? Ihe ndị a bụ ụfọdụ akụkụ dị mkpa m chịkọtara mgbe ịzụrụ brushes ndị a.
Nke mbụ, ọdịdị nke ahịhịa
Ke ofụri ofụri, a na-eji brush gburugburu. Enwere ike ịkekọrịta ọtụtụ n'ime ha, yabụ na agaghị m abanye n'ime nkọwa ebe a. N'ezie, echere m na mkpịsị bọlbụ na-adabere na afọ pen iji chọpụta njigide mmiri, na ụdị nke nib na-ekpebi n'ọnụ nke pen.
Ihe na-esote bụ ahịhịa na-adị larịị, nke na-agbatị ma nwee ahịrị brushes. Nwere ike ịzụta ahịhịa dị larịị abụọ, otu obere na otu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmadụ ole na ole kewara, enwere ike iji ya mee eserese ala. A na-eji ahịhịa ahihia agbasa mmiri (maka ntinye akwụkwọ ma ọ bụ eserese mmiri). Ohaneze, ịnwere ike ịhọrọ usoro 16mm buru ibu ma ọ bụ buru ibu karịa 16K.
Enwekwara ụdị ndị ọzọ, dịka ọdịdị onye ofufe, ọdịdị ire pusi, ọdịdị agụba, wdg, nke anaghị eji ya eme ihe, na n'ozuzu adịghị mkpa ịzụta.
Nke abụọ, nha nke ahịhịa (ogologo na obosara)
Nke ato, nha bu ihe mmadu nile puru iche banyere. Dị ka m si zụta ọtụtụ mkpụrụ naịlọn site na 0 ruo 14 maka Sakura na mbido, e nwere ma ndị ukwu ma ndị pere mpe. Mgbe ị sere obere oge, ị ga-ahụ na e nwere naanị mkpịsị edemede abụọ ị na-eji eme ihe ugboro ugboro.
Were onwe m dịka ọmụmaatụ. M na-agba agba na usoro 16K na mgbe ụfọdụ 32K. Yabụ ọ bụrụ nchacha nke Western, ọ na-abụkarị Nke 6 na Nke 8, nke pụtara obosara (dayameta) nke pen bụ 4-5 mm, na ogologo nke pen bụ 18-22 mm. Maka ahịhịa mba, Xiuyi dị 4mm n’obosara na 17mm n’ogologo, a pụkwara iji pen pen dị 5mm dịka Ye Chan, Ruoyin wdg.